ဒီဆောင်းပါးနဲ့ လိုက်ဖက်မယ်ထင်လို့ ဂျောက်ဂျက်ရဲ့ သီချင်းတပုဒ်ကိုပါ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ရှုစားတော်မူကြပါ။ဆေးရည် တစက်နှစ်စက်လောက် ထည့်စမှာ စပ်ဖျင်းဖျင်းနဲ့ ပူစပ်ပူလောင် ဖြစ်ပေမယ့် တကယ်ပဲ အတွင်းသား တွေကို အသားတက်စေပြီး အတွင်းဆွဲအား ပြင်းလာတဲ့အတွက် အမျိုးသားတွေကို ကျေနပ်စေတယ်လို့ မဗေဒါက ပြောပါတယ်။မဗေဒါလို အမျိုးသား တွေနဲ့ အလုပ်သဘောအရ လိင်ဆက်ဆံနေကျ သူတွေအတွက်ကတော့ အပျို ပြန်ဖြစ် ဆေးလို့ အလွယ်တကူ ခေါ်နေကြတဲ့ LADY A VERGIN (Tightening Liquid) ဆေးရည်ကို မကြာခဏ ၀ယ်ယူ သုံးစွဲနေကျဖြစ်ပါတယ်။တခါသုံးရင် ဆေးရည် ၃ စက်လောက်ပဲ မိန်းမအင်္ဂါထဲကို ထည့်ရတာ။ အနံ့ကလည်း သင်းသင်းလေး မွှေးတယ်။ ဒါပေမယ့် စပ်ဖျင်းဖျင်းတော့ ဖြစ်တယ်။ ဆေးရည်ထည့်ပြီး အနည်းဆုံး ၄ မိနစ်၊ ၅ မိနစ်လောက်နေမှ လိင် ဆက်ဆံလို့ရတာ” လို့ မဗေဒါက ရှင်းပြတယ်။ဆေးရည်သုံးစွဲပြီး လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ မိန်းမအင်္ဂါအတွင်းသားတွေက ဆေးရည်ကြောင့် အသားတက်လာပြီး ကျုံ့ချင်၊ ရုန်းချင်သလို ဆွဲအား ကောင်းလာတဲ့အပြင် မိန်းမ အင်္ဂါဝဟာလည်း လိင် ဆက်ဆံဖူးသူနဲ့ မတူဘဲပိတ်နေတာကြောင့် အမျိုးသားတွေ အဆင်ပြေ ကျေနပ်လေ့ရှိတယ်လို့ မဗေဒါက ဆက်ပြောပြတယ်။အသက် ၃၀ ၀န်းကျင်အရွယ် မဗေဒါဟာ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ကတည်းက လိင်အလုပ်သမ ဘဝနဲ့ အသက်မွေးခဲ့သူဖြစ်ပြီး တခုလပ်တဦး ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။“ကလေး နှစ်ယောက်၊ သုံးယောက် မွေးဖူးတဲ့ သူတွေတောင် ဒီဆေးသုံးထားရင် ပိတ်ကုန်တယ်။ အပျိုစင်လောက် မဟုတ် ပေမယ့် နဂိုမူလထက်တော့ ပိုပြီးကျဉ်းသွားတာ အမှန်ပဲ။ လိင်ဆက်ဆံတဲ့ ကြိမ်ရေ ဘယ်လောက်ပဲ များများ ဒီဆေးသုံးရင် အေးအေးဆေးဆေးပဲ” လို့ မသိင်္ဂီကလည်း ပြောပြတယ်။အသက် ၄၀ ခန့်အရွယ် မသင်္ဂီဟာ ကလေး ၂ ယောက် မိခင်ဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင် သာယာရေးအတွက် ဒီ ဆေးရည် ကို ရံဖန်ရံခါ သုံးစွဲကြည့်သလို၊ သူ့ ခင်ပွန်း ဖြစ်သူကလည်း သဘောကျတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။အဲဒီ ဆေးရည်ကို ရန်ကုန်မြို့က ကွန်ဒုံးရောင်းလေ့ရှိတဲ့ လမ်းဘေး ကွမ်းယာဆိုင်တွေနဲ့ ဆေးဆိုင်ကြီး တချို့မှာ “အပျိုပြန်ဖြစ်ဆေး” ဆိုပြီး မေးဝယ်ရင် ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။အဲဒီ ဆေးရည်ဟာ ဈေးကွက်ထဲကို ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း နယ်စပ်ကတဆင့် တရားမဝင် ၀င်ရောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး မကြာခင်နာမည်ကြီး သွားတယ်လို့ ရန်ကုန် ဆေးအရောင်းဆိုင်ကြီး တဆိုင်က ပြောပါတယ်။“အရမ်းရောင်းနေရတယ်။ ဈေးလည်း သက်သာတော့ သုံးနေတဲ့ သူတွေက ပစ္စည်းပြတ်ကုန်မှာ စိုးလို့ ပါကင်လိုက်၊ ဘူးလိုက် လိုက်ဝယ်ကြတယ်။ အိမ်ထောင်ရှိ အမျိုးသား တွေကလည်း အိမ်က မိန်းမအတွက် လာဝယ်ကြတယ်” လို့ ဆေးအရောင်းဆိုင် တဆိုင်က ဆိုပါတယ်။အဲဒီ LADY A VERGIN (Tightening Liquid) ဆေးရည် ဈေးနှုန်းတွေဟာလည်း အနိမ့်ဆုံး ကျပ် ၇၀၀ ကနေ ကျပ် ၁၀၀၀၊ ကျပ် ၁၅၀၀၊ ကျပ် ၃၀၀၀ ဆိုပြီး အစားစား ရှိပါတယ်။ ဆေးဗူးမှာတော့ Special formula PARIS လို့ပါရှိပြီး ဆေးရည်တဘူးမှာ6ml ပါဝင်ပါတယ်။ တဘူးဝယ်ရင် ၅ ကြိမ်လောက် သုံးစွဲနိုင်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။လိင်အလုပ်သမတွေက ဒီဆေးကို ပုံမှန် သုံးစွဲလေ့ ရှိပေမယ့်လည်း ဆေးရည်နဲ့ မတည့်တဲ့ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။“ကျမကတော့ အဲဒီဆေးနဲ့ လုံးဝ မတည့်ဘူး။ ဆေးရည် ၀င်သွားရင် ယောင်ကိုင်း လာတာပဲ။ ကီးမို့စ်သောက်မှ ပျောက်တော့တယ်။ တည့်တဲ့ သူတွေကတော့ အဆင်ပြေတာပေါ့။ မတည့်တဲ့ သူတွေလည်း ရှိတာပဲ” လို့ မသရဖီက ပြောပါတယ်။မသရဖီ ကတော့ ရန်ကုန်မြို့လယ် အနှိပ်ခန်းတခုက ဖြစ်ပါတယ်။ သူက လူရွေး ဆက်ဆံသလို ဈေးနှုန်းလည်း မြှင့်ထားတဲ့အတွက် လိင် ဆက်ဆံဖော် နည်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အနှိပ်ခန်းက တခြား မိန်းကလေး တွေကတော့ အဲဒီ ဆေးရည်ကို ၀ယ်ယူသုံးစွဲကြပြီး တည့်သူ ရှိသလို၊ မတည့်တဲ့ သူတွေလည်း ရှိတယ်လို့ သူက ပြောပြပါတယ်။ဆေးရည်နှင့် မတည့်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ရှိသလို တချို့ အမျိုးသားတွေလည်း အဲဒီ ဆေးရည်နဲ့ မတည့်ကြဘူးလို့ သိရပါတယ်။အဲဒီ ဆေးရည်နဲ့ ဓာတ်မတည့်တဲ့အခါ ယားတာ၊ ယောင်ယမ်းတာ၊ အပူလောင်သလို အသားနီလန်တာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပြီး ဆေးခန်းရောက်ရ သူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။“လူပြောများလို့ မိန်းမတွက် တဘူး ၀ယ်ပေးလိုက်တာ။ ကျနော်တို့ လင်မယား နှစ်ယောက်စလုံး ဆေးခန်း ပြေးရတယ်။ မတည့်ဘူး၊ ယောင်လာလို့။ မိန်းမဆို ကြောက်ပြီး ဖျားတောင် ဖျားတယ်” လို့ ရန်ကုန် ဒေသခံ အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသား တဦးက ဆိုပါတယ်။အဲဒီ ဆေးရည်ထဲမှာ အတွင်းအင်္ဂါသားတွေကို ပွစေ၊ ကျုံ့စေ၊ ရုန်းစေတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေ ပါဝင်ပြီး မိန်းမတွေရဲ့ အတွင်း အင်္ဂါ အသားနုကို ထိခိုက် စေနိုင်တာကြောင့် မသုံးစွဲသင့်ဘူးလို့ အထွေထွေရောဂါကု ဆရာဝန်ကြီး တဦးက ပြောပါတယ်။“ဒီလို ဆေးမျိုးတွေက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး များတယ်။ မိန်းကလေးတွေရော၊ ယောက်ျားတွေ အတွက်ပါ မကောင်း ပါဘူး။ မကြာခဏ သုံးရင်တော့ မိန်းမရဲ့ အင်္ဂါ အတွင်းသားတွေကို ထိခိုက်လာမယ်၊ သူ့အဖော် အမျိုးသားရဲ့ လိင်တံ အတွင်းသား ထိပ်လည်း ထိခိုက်လာမှာပဲ။ သဘာဝ အတိုင်းပဲ ကောင်းပါတယ်” လို့ အဲဒီ ဆရာဝန်ကြီးက ရှင်းပြပါတယ်။ကြည်ဝေ
ဧရာဝတီ ကိုယ်ပွား ဆိုတာ မူလပင်မ ဧရာဝတီ၏ စစ်အာဏာရှင် ဆန့် ကျင်ရေး၊ဒီမိုကရေစီ ရေး၊ လူ့ အခွင့်အရေး တွေ အတွက် လည်း တာဝန်ရှိပါတယ်။ခု ပို့ စ်ထ် ကို လေးနက်ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ပါတယ်။HIV/AIDS ကာကွယ်ရေးမျိုးတွေ၊ လိင်ကျွန်၊လိင်လုပ်သားဘ၀ တွေ ရေးစရာ၊ ပြောစရာတွေ အများကြီး ရှိမှာပါ။ခု ဟာ က ဘာလဲ။ ဘယ်လဲ။ခေတ်ဟောင်းသတင်းစာတခုမှာပါဘူးတဲ့ မျက်နှာဖြူမိန်းမ ၃ ယောက် က မဟားဒယားအပြုခံရခြင်း၊ အင်းလျားကန် မှ ရေဘ၀ဲတွေ သွားအမှတ်ရမိတယ်။ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချပါတယ်။ဒီပို့ စ် ကို။တင်ရဲမှတင်ပါ။ ဒီကော်မန်း ကို။
သီချင်းလေးကောင်းတယ် အေရာဝတီ ဆက်လုပ် ဗရာဘို>>>
ဂျောက်ဂျက် တဲ့ စည်းချက်ဝါးချက် ကာရံ နဲ့ ဆဲတတ်တဲ့ ထူးခြားတဲ့ပါရမီ ရှင် တယောက်ပဲ မိုက်ရိုင်းတဲ့ နေရာမှာ ထူးချွန် ပါပေတယ်
Recommendation for Big, Totally(I agree with you), How rude that guy is !
I could not understand what kind of knowledge this post has given to us.Should we imitate it or not?
Whatainsulting guy is he? I thought that he didn't have any sister.So rude , willd and motherless guy.
ပြောမယုံ ကြုံဘူးမှ သိ .... ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးတွေကို သတိရပြီးမှ . လုပ်ပါ။မယုံဘူး ... ကောင်းရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ မယုံဘူး ... သုံးကြည့်မယ် ... ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ကျွန်တော်တို့ လူဖြစ်ခဲ့မှုတွေက အဲ့ဒီလို စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ လူသားတွေ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့  အရသာ ခံလိုမှုကြောင့်လား ...တော်ဘီနော် ...